ကျွန်တော့်အိမ်: မေဆွိ၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
အင်မတန် ကောင်းသော ရည်းစားစာ
အမေရိကန် ဒေါ်လာ၂၀တန်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှု ၃ခု
ဒီအက ၅ခုထဲက ဘယ်အက ကို နိုင်မယ်လို့ ထင်သလဲ?
အဖျက်သမားများနှင့် ကျွန်တော်တို့၏ ရပ်တည်မှု
သတင်း Center - July 27th မြန်မာ့ ကမ္ဘာ့ သတင်းများ
www.myhome16.com သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
Research Paper မနက်ဖြန် Due ပြီ ... !!
ကျောင်းတက်နေတယ် ဆိုရင်….. အပိုင်း(၂)
Provo Canyons Camping Trip
သတင်း Center - July 20 မြန်မာ့ ကမ္ဘာ့ သတင်းများ
မြန်မာ မဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသား များသို့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ် (၁၉၁၅-၁၉၄၇...
Examplez အဖွဲ့၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
ကျောင်းတက်နေတယ် ဆိုရင်….. အပိုင်း(၁)
သတင်း Center - July 15 မြန်မာ့သတင်း ကမ္ဘာ့သတင်း
ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် အရပ်ဖြင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်...
ကျွန်တော့်၏ ပုံမှန် တနင်္လာ
သတင်း Center - ဇူလိုင် ၁၂ မြန်မာ ကမ္ဘာ သတင်းများ
တိုင်းပြည်၏ လိုအပ်နေသော တစ်စုံတစ်ခု
Poem Corner အား ဖွင့်လှစ်ခြင်း
သတင်း Center - ဇူလိုင် ၁၀ မြန်မာ ကမ္ဘာ သတင်းများ
Downtown Shopping Mall သို့ အပျင်းပြေ တစ်ခေါက်
သတင်း Center - ဇူလိုင်၇ရက်နေ့ မြန်မာ့သတင်း ကမ္ဘာ့သတ...
ထူးအိမ်သင်၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
The Dynamic, Rotating Dubai Tower
ကြေးအိုး စပယ်ရှယ် ချက်စားကြမယ်
9mm Group ၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
The Lord of Dance - Micheal Flatley
သတင်း Center - July 3rd မြန်မာ့ ကမ္ဘာ့ သတင်းများ
သတင်း Center - 2nd July ကမ္ဘာ့သတင်းများ
သတင်း Center - 2nd July မြန်မာ့သတင်းများ
A Cool Song (11) ဒိုင်ယာရီထဲမှ မင်းသာ မင်းပါ
မေဆွိ၏ သီချင်းများ စုစည်းမှု
A Cool Song (10) James Blunt ၏ အချစ်ရယ် တာ့တာကွယ်...
ဒီတစ်ခါတော့ အသံအေးအေးတွေ နားထောင်ရတာ များလို့ ပျင်းပျင်း ဆူးဆူး ထိထိ နားထောင် ချင်သူများ အတွက်၊ သူမရဲ့ ပရိသတ်များအတွက် မေဆွိရဲ့ သီချင်းတွေကို လည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မောင် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ဂီတလောက မှာ မေဆွိဆိုတဲ့ နာမည်ရအောင် တက်လာခဲ့သူပါ။ အသံအားကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ အခုတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သူမ၏ ခင်ပွန်းနှင့် အခြေချ နေထိုင်နေပါတယ်။ သီချင်းတွေလည်း ပွဲတွေ ရှိရင် ဆိုနေတုန်းပါပဲ။ မြန်မာပြည် ပြန်ပြီးတော့လည်း ဆိုပါသေးတယ်။
ရေးသားသူ Tea at 2:07 AM